Ahoana ny fomba hanaovana fampisehoana amin'ny PowerPoint | Famoronana an-tserasera
Lola curiel | | Fitaovana famolavolana, Tutorials, maro
Microsoft PowerPoint dia iray amin'ireo fitaovana ampiasaina indrindra amin'ny fanaovana fampisehoana. Mora ampiasaina ary manolotra fahafaha-manao tsy manam-petra raha ny amin'ny famoronana endrika famoronana sy matihanina. Amin'ity lahatsoratra ity dia hasehonay anao ny fomba fampiasana an'ity programa ity hatrany am-boalohany, hampahafantatra anao ireo fitaovana fototra izahay ary hampiditra tolo-kevitra vitsivitsy hahombiazanao amin'ny slide-nao Te hahay hanao fampisehoana amin'ny PowerPoint ve ianao? Aza adino ny tohin'ny lahatsoratra.
1 Manomboha amin'ny PowerPoint
1.1 Sokafy misokatra
1.2 Mamorona slide vaovao
1.3 Asehoy na afeno ny mpitondra sy ny mpitari-dalana
2 Fitaovana lehibe hanaovana fampisehoana ao amin'ny PowerPoint
2.1 Fitaovana endrika
2.2 Fitaovana lahatsoratra
2.3 Fitaovana fanaovana sary
2.3.1 Esory fitaovana fitaovana
2.3.2 Vokany sy fanitsiana
2.4 sary Masina
2.5 Fitaovana sary
3.1 Mampiasà loharano ivelany
3.2 Karakarao ny loko
Manomboha amin'ny PowerPoint
Rehefa manokatra ny programa ianao dia ho hitanao izany PowerPoint dia manolotra modely izay efa namboarina ary vonona ho anao hampiditra ny atiny. Mazava ho azy fa azonao atao ny mampiasa azy ireo, fa amin'ity paositra ity dia hisafidy ny hisafidy antontan-taratasy banga izahay, izay hanampianay ireo singa sy loharanom-pahalalana.
Raha efa manana ny programa misokatra ianao, dia afaka mamorona antontan-taratasy vaovao ianao amin'ny fipihana ny kiheba fisie> fampisehoana vaovao ao amin'ny menio ambony indrindra.
Mamorona slide vaovao
Ao amin'ny tontonana an-trano dia manana bokotra ianao milaza izany "Slide vaovao", amin'ny fipihana eo aminy dia miteraka slide vaovao ianao. Raha tsindrio eo ankavanan'ny bokotra ny zana-tsipìka kely dia ho hitanao izany azonao atao ny mamorona sary mihetsika izay manaraka maodely maodely. Misy ny endrika noforonina mba hanafarana ny karazana atiny rehetra: lohateny, lohateny ary atiny, atiny roa sosona, hanaovana fampitahana ...
Na izany aza, raha hianatra hampiasa ny fitaovan'ny programa dia mila ilay slide ho miboridana araka izay azo atao isika, noho izany dia tsy hisafidy na iza na iza isika ary hamela ny blankantsika foana.
Asehoy na afeno ny mpitondra sy ny mpitari-dalana
Mba tsy hizarana ireo singa "amin'ny maso" dia hampavitrika ireo lalàna sy torolàlana isika. Ny tari-dalana dia hanampy antsika hitazona ny sisiny mitovy amin'ny slide rehetra ny fanolorana.
Raha te hampandeha ny lalàna sy ny torolàlana, ny zavatra tsy maintsy ataonao dia ny mifantina azy ireo ao amin'ny takelaka "jereo".. Ny tolo-kevitro dia ny fitazonanao ireo mpitari-dalana afovoany, ny mitsangana ary ny mitsivalana. Ny fananana ny efijery zaraina ho efatra dia fika tsara handaminana tsara ireo sombinao.
Ary koa, tokony hamorona mpitari-dalana efatra hafa ianao hamaritana izay mety ho maridan'ny slide-nao. Mba hamoronana torolàlana vaovao, dia tsindrio fotsiny ny bokotra "safidy" amin'ny kitendry solosainao ary sintomy ireo efa misy. Mariho fa rehefa manao an'io ianao dia miseho ny boaty iray izay asehon'izy ireo ny halavany ametrahanao. Vantany vao nahavita ity dingana ity ianao dia vonona hanomboka hamolavola!
Fitaovana lehibe hanaovana fampisehoana ao amin'ny PowerPoint
Ity fitaovana ity dia mety ho tena ilaina amin'ny famoronana singa haingon-trano manome ny maha-izy azy sy ny firaisankina amin'ny volavolanao. Manisy endrika, Handeha amin'ny takelaka "insert"> "form" izahay. Hanokatra menio kely ianao ahafahanao misafidy ny fomba tianao.
Mba hanovana ny toetran'ny endrika dia handeha ho any amin'ny tontonana endrika endrika, ao no azonao atao ny manova ny loko fenoy, azonao atao ny manampy sisin-tany ary mampihatra karazana effets aza.
Raha ny amiko dia handeha hilalao ireo zoro mahitsizoro aho mba hamoronana maodelin-tsary hafa:
Izaho dia hamorona modely amin'ny fampiasana ny mahitsizoro toy ny fehin-doha, apetrako eo ambanin'ny slide
Hamorona sary mihetsika misy ambadika mainty aho
Ary farany, hamorona modely roa hafa aho, izay mamela ny zoro hitsinjara hizara roa ny efijery (ny iray manana ny endrika eo ankavanana ary ny iray miaraka amin'ny endrika ankavia)
ihany koa azonao atao ny mampiasa ny endrika ho boaty an-tsoratra, hanasongadinana ny ampahany sasany amin'ny atiny.
Raha tianao izany mamorona endrika manokana, vitanao io! fotsiny tsindrio ny endrika ary amin'ny tontonana format dia ampiasao ny safidy "manova teboka" hanova ny endrika tany am-boalohany.
Ao amin'ny tontonana endrika afaka mandamina ireo endrika koa ianao azonao atao ny mitondra ny endriny mankany aloha, azonao alefa any aoriana izy ireo ary mampiasa ny fitaovana fampifanarahana azonao atao ny maka antoka fa ny singa rehetra dia milahatra tsara.
Ilaina ny fitaovana an-tsoratra raha te-hamorona fampisehoana tsara ianao. HO AN'NY mamorona boaty lahatsoratra mila mandeha amin'ny tontonana fotsiny ianao "Atsofohy" ary safidio ny "boaty soratra".
Azonao atao ny manamboatra tsindry tokana mba hahafahan'ny boaty hifanaraka amin'izay hosoratanao na raha tianao dia azonao atao ny misintona ny totozy ka voafetra amin'ny habe manokana ny lahatsoratra.
Tadidio izany azonao atao ny manisy tsipika sy mampiasa ny fisongadinana hisarika ny saina amin'ny faritra manokana amin'ny lahatsoratrao. Ao amin'ity ohatra ity dia nanasongadina ny maizina aho mba hahafahako manova ny endritsoratra fotsy ary mamorona fifanoherana izay milaza amin'ny mpamaky hoe: "zava-dehibe izany.
iray hafa Safidy an-tsoratra dia ny WordArt, lahatsoratra ho avy noforonin'i PowerPoint ary izany dia misy fiatraikany manokana sy toetra mampiavaka azy. Azonao atao ny manamboatra azy ireo mba hanome azy ireo ny fifandraisanao manokana na hampifanaraka azy ireo amin'ny fomban'ny fampisehoana ary loharano lehibe ho an'ny lohateninao izy ireo.
Fitaovana fanaovana sary
Ireo sary dia a fitaovana fifandraisana matanjaka be, satria izy ireo dia afaka mamintina atiny betsaka amin'ny habaka kely ary miteraka fiatraikany lehibe.
Hay fomba roa hanampiana sary mankany amin'ny PowerPoint anao:
Azonao atao ny mandeha any amin'ny tontonana "mampiditra"> "sary" ary misafidy "sary avy amin'ny rakitra"
Azonao atao ny misintona ny sary mivantana avy amin'ny fampirimana.
Esory fitaovana fitaovana
Ny fampiasana sary tsy misy ambadika dia afaka manampy anao manampy fikitika hafa amin'ny slide-nao. Ny zavatra tsara dia, noho ny fitaovana "esory ny fiaviana", azonao atao ny manala ny sary avy amin'ny sarinao nefa tsy mila miala ao amin'ny PowerPoint.
La fitaovana "manala vola", ity misy ao amin'ny tontonana "endrika endrika", izay miseho ho azy eo an-tampon'ny efijery rehefa tsindrio ny sary rehetra. Tena mora ampiasaina izy io, mila fotsiny ianao safidio amin'ny pensilihazo "+" izay tianao tazomina ary miaraka amin'ny pensilihazo "-" izay tianao esorina avy amin'ny sary. Rehefa vitanao dia kitiho ny tsindry sao very ny fiovana.
Vokany sy fanitsiana
Ny fanananao sary mitovy endrika dia afaka manome bonus kalitao amin'ny fampisehoana ataonao. Amin'ny endrika sary dia manana fitaovana roa misy ianao ahafahanao manitsy ny sary.
Azonao atao ny mampiasa fanitsiana sy fanitsiana loko mba hanomezana endrika sarindra ny sarinao ny slide. Amin'ity ohatra ity dia nisafidy ny hametraka mainty sy fotsy ny sariko aho ary namboariko ny famirapiratana mba ho tsara kokoa ny valiny.
Ny sary masina, toy ny sary, dia manana fahefana hamintina ireo hevitra ao amin'ny toerana kely iray ihany koa. Soa ihany ao amin'ny PowerPoint afaka mampiditra sary masina ianao nefa tsy miala amin'ilay programa. Raha tsindrio ny "kisary" ao amin'ny takelaka "ampidiro" dia hiditra amin'ny tontonana iray izay ahitanao kisary tsy manam-petra hisafidianana. Ampiasao ny motera fikarohana mba hanivanana ary hahitanao ireo izay ilainao haingana kokoa. Ao amin'ny tontonana "sary", izay miseho etsy ambony rehefa manindry ny iray amin'ireny ianao, azonao atao ny manova azy ireo hampifanaraka azy ireo amin'ny fomba fampisehoanao.
Ilaina tokoa ny sary fampitana hevitra amin'ny fomba maso, haingana sy mazava. Sahia mampiasa azy! Ataovy ao an-tsaina fa ireo sary dia tsy natao hanehoana angon-drakitra faran'izay be pitsopitsony, azonao atao ihany koa ny mampiasa azy ireo ho toy ny loharanom-pahalalana hamoronana hafatra amin'ny fomba hafa.
Afaka manampy sary ianao amin'ny alàlan'ny tontonana "insert"> "graphics". Hiditra amin'ny tontonana kely mitete ianao izay hisehoan'ny karazana sary rehetra atolotry ny PowerPoint. Safidio ny mety indrindra ary hisokatra mivantana ny takelaka Excel ahafahanao mampiditra ny angona. Rehefa vitanao dia tsy ilaina ny mitahiry ny takelaka, akatony fotsiny izany, rehefa miditra ny angona ianao dia hovaina ny graf.
Azonao atao ny manova ny fomban'ny tabilao, na ny ampahany amin'ny lahatsoratra na ny sary. Azonao atao ny manova ny endritsoratra sy ny habeny. Ao amin'ny tontonana endrika afaka manova ny fomba sary sy ny loko.
Mampiasà loharano ivelany
Mampiasà loharano ivelany hevitra tsara ny manankarena ny endrik'ireo sary mihetsika. Na dia programa feno be aza ny PowerPoint ary afaka mamorona fampisehoana mahafinaritra miaraka amin'ireo loharano atolotrao ianao, tsy maharary mihitsy ny famoronana fanampiny!
Ohatra, afaka mandeha any amin'ny Picsart ao amin'i Google ianao to download autocollant izany dia hanomezana fifandraisana manokana kokoa amin'ny slide. Matetika aho no mikaroka miaraka amin'ireo teny "Vintage", "tape", "boaty soratra" ary ireo izay maharesy lahatra ahy indrindra amin'ny maha boaty an-tsoratra na toy ny sary.
Karakarao ny loko
Fitaovana fifandraisana ihany koa ny loko, izy io aza mahavita manaitra ny fihetseham-po sy ny fihetsem-po mihitsy. Ny fisafidianana an'ity tononkalo pastel ity dia tsy mitovy amin'ny fisafidianana fitambarana mavo, mainty sy fotsy. Ny mifanohitra amin'ireto farany, ny fitambaranà hazavana maizina miaraka amin'ny fotsy na mavo, dia mampita izany tsara lavitra. hafatra momba ny zava-mahadomelina sy risika nampiasako tamin'ilay ohatra. Ny pastel adaladala kosa dia mety tsara kokoa hampiroborobo, ohatra, marika akanjo an-jaza.
Raha mila aingam-panahy ianao dia afaka mankany amin'ny ColourLover, pejy web izay ahitanao palety efa noforonina. Ary koa Loharanom-pitaovana tsara handeha amin'ny Adobe Color mamorona fitambarana mirindra izay miasa tsara.
Ao amin'ny PowerPoint afaka mamorona paleta miloko anao ianao. Mba hitondrako ny iray amin'ireto palety ireto any amin'ny PowerPoint, ny mazàna ataoko dia ny maka sary an-tsary azy, ampidiro ao anaty slide ary miaraka amin'ny eyedropper no itehirizako ny loko rehetra izay hapetako amin'ireo singa amin'ny fampisehoana nataoko taty aoriana.
Ny typography, toy ny loko, dia mifampiresaka, noho izany dia ilaina ny manokana fotoana hisafidianana ireo endritsoratra mety. Raha tsy resy lahatra amin'ny endritsoratra efa napetraka ianao dia azonao atao ny misintona endritsoratra vaovao amin'ny Internet. Google Font dia iray amin'ireo banky endritsoratra malaza indrindra ary iray amin'ireo azo antoka indrindra.
Raha hametraka endritsoratra vaovao dia mila mifantina ilay tianao fotsiny ianao, misintona azy, sokafy ny fisie ary kitiho ny font install.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Ahoana ny fomba hanaovana fampisehoana amin'ny PowerPoint
Adobe Premiere Pro sy Premiere Rush dia havaozina miaraka amin'ny fanatsarana ny fahombiazana